पुरुषहरु सेक्स फिलिङ लुकाइराख्छन् | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← तत्कालीन सैनिक सचिवको खुलासा- ‘दरबार हत्याकाण्ड राजनीतिक षड्यन्त्र थियो’
प्रमले कानुनमन्त्रीलाई हप्काउँदै भने- मन्त्री भएर भ्रष्टाचारीलाई साथ दिने? →
एजेन्सी । अहिलेसम्म महिलाहरुले आफ्नो मनको कुरा व्यक्त गर्दैनन् लुकाइराख्छन् भनिदै आएको थियो । तर एउटा नयाँ शोधका अनुसार पुरुषहरु पनि धेरै कुरा मनमा लुकाएर राख्ने गर्दछन् भन्ने खुलासा भएको छ । त्यसैले महिलामाथि आरोप लगाउनुअघि पुरुषहरुले आफ्नो मनमा गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने भएको छ ।
सेक्स एक्सपर्ट डा. लुआन ब्रीजेनडाइनले गरेको अध्ययनमा पुरुषहरुले आफूभित्र अनेकौ फिलिङ लुकाइराख्ने गरेको पत्ता लगाएका हुन् । पुरुषहरु बाहिर अर्कै देखावटी गर्दछन् । पुरुषहरुको दिमाग बुझ्न कठिन छ । सेक्समा मामिलामा भन्दा पुरुषहरुको चाहना बढी हुन्छ । तर उनीहरु आफ्नो फिलिङ लुकाइराख्ने गर्दछन् । यहाँसम्म कि यौन चाहनामा उनीहरु महिलाहरुसँग चिटिङ गर्न पनि पछि हट्दैनन् ।
लुआनका अनुसार यसका लागि पुरुषहरुमा पाइने हार्मोन टेस्टोस्टेरांन जिम्मेवार छ । यसैका कारण पुरुषहरुको आँखा महिलाहरुको शरीरको कर्व्समा घुमिरहन्छ । यति मात्र होइन, महिलाहरुको तुलनामा यौन चाहना पुरुषहरुमा साढे दुई गुना बढी हुने गर्दछ । त्यसैले महिलाहरुले पनि पुरुषहरुसँग गम्भीरतापूर्वक काम लिनु बाञ्छनीय छ ।